Maxay tahay arrin gaar ah oo ku saabsan Soulsex iyo sidee u fulisaa?
Waa maxay Soulsex?
Sidee Soulsex u shaqeysaa?
Jinsi ma jirin wakhti dheer, haddii ay sidaas tahay, markaa waa uu ku caajisaa, joogtada ah iyo maareynta. Dhunkashada soo dhaweynta ka dib shaqadu macnaheedu maahan mid ka mid ah labada qof ee lamaanaha ah, waa ku dhawaad ​​raaxo la'aan.
Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha noqotee, labadaba lammaane waa isku mid: waxay u badan yihiin inay ku qabtaan niyadjabka, dareenka shucuureed iyo dareenka, dabcan, sidoo kale galmada. Kaliya maaha la-joogaha, waxay u muuqataa, in ay u dhaqaaqday masaafada.
Soulsex waxay noqon kartaa habka dib loogu dhigo dabciga qofka isla markaa jacaylku weli jiro.
Sida ugu dhow lamaane sida waligaa leh Soulsex
Ku raaxeysiga caqliga iyo maskaxda
Bilowga xidhiidh ama xaalad, xiisaddu waxay u muuqataa inay had iyo jeer joogaan. Waxaan nafteena siinaa lammaane, waxaana jira wax adag oo uu samayn karo si aan u joojino inaan ka helno soo jiidasho.
Tusaale ahaan, dadka bukaansocodka ah ee aan awoodin inay isticmaalaan maskaxdooda - waxaa laga yaabaa inay fursad u helaan in ay eegaan noloshooda jinsiga iyagoo aragtidooda sabab u ah - waxay leeyihiin habdhaqan la mid ah. Daryeellayaasha guryaha xanaanaynta ayaa soo wariyay in qaar badan oo ka mid ah dadkaas deggan ay yihiin kuwo galmo firfircoon, inkastoo ay tahay dareen macneeyaal ah.
Doonista jinsiga waxaa jira xitaa, xitaa wadashaqeyn haboon. Hase yeeshee, haddii caado-qabashadu timaado, maskaxdu waxay isku beddeshaa marxaladda - wax badan oo ka badan sidii hore waxay rabeen inay dhaleeceeyaan. Dhunkasho caan ah ma dareemayso wanaag, laakiin waa fekerka ka dhiga midabtakoorka kale.
Qof kastaa wuxuu xusuusiyaa waayo-aragnimada jinsiga, taas oo aan ahayn kaliya jireed, laakiin xiriirka dareenka ee lamaanaha. Gaar ahaan xiriirada cusub ee bilawga ah ee jacaylku uu sax yahay iyo hadana aysan jirin wax caadooyin ah, arrimahan oo ah xiriirka galmada. Taasi waa qoraaga Eva-Maria Zurhorst waxay rabtaa in ay dib u soo ceshato buugeeda iyada "Jinsiga jilicsan - Dib u furida Jacaylka Jirka".
Sababtoo ah maxay noo tahay nooca nooca jinsiga ah? Waa habka taabashada ay u wanaagsan tahay, iyo sidoo kale sida aan u awoodi karno waxa aan jeclayn. Wada-hawlgalayaasha cusubi waxay isku bartaan oo waa inay tahay inay wadaagaan waxa ay jecel yihiin iyo waxa aanay samayn. Waa dadaal kasta oo lamaane ah si aad u ogaato kan kale ee arrintan ku saabsan, si aad u ogaato waxa isaga / iyada jecel yahay iyo nooca taabashadu u qaban doonaan isaga iyo marka.
Xilliga xiriirka muddada-dheer, waa in aan mar walba soo ogaanno halka uu qofku rabo inuu taabto, jacaylku wuxuu noqonayaa safar joogta ah oo lagu helo. Xaalad caadi ah ma jirto, iyo sidoo kale mid ka yaqaana naftiisa - taas oo Soulsex ka dhigaysa mid soo jiidasho ah, mar walba oo cusub oo cusub ee baahida hadda iyo baahida lamaanaha iyo u dhowaanshaha, oo soo baxa iyaga oo soo bandhigaya.
Lammaane da 'yar - jilicsan
Soulsex wuxuu ka bilowdaa qof walba.
Haddii ay sidaas tahay, waa la hayn doonaa. Laakiin haddii ay isku dayaan inay ka baxaan xiisad iyo fogaansho, waxaa haboon in la yiraahdo lammaanaha. Ma aha in lagu eedeeyo, laakiin xaqiiqdu waxay tahay in dhunkashada waa in ay ka duwan tahay. Xooggan. Dhab ah.
Waxaa laga yaabaa in aad ka baxdo keligaa, haddii aysan jirin. Maskaxdani waxay wali u baahan tahay in la horumariyo lamaane iyo dad badan, laakiin way wadaagi karaan. Sidoo kale waa muhiim inaad u sheegto lammaanaha iyo inaad muujiso waxa aad rabto - waana muhiim inaad kaqaybqaadato.
Taas micnaheedu ma ahan dharka duurjoogta ah ama xargo aan fiicneyn, iskuday "waxyaabo cusub" si aad ugu jilciso nolosha jinsiga. Waxay ku saabsan rabitaanka jinsiga. Mid ka mid ah lammaanuhu wuxuu kula xiriiraa adiga. Lammaanaha kale wuxuu kudhaqaaqaa safarka lagu ogaanayo fulintooda - iyo sida kale.
Midabaynta bogsiga erotic - haween ku tiirsan derbiga
Erotic color Erotic ah Erotic ee barkadda